Britain Site Train - 8 On Ma Off-Track Atụmatụ | Save A Train
Home > Train Travel Britain > Britain Site Train - 8 On Ma Off-Track Atụmatụ
Britain gọziri ihe otutu ụgbọ okporo ígwè netwọk nke na-enwe mmetụta ya na-elekọta mmadụ akụkọ ihe mere eme na aku na uba na mmepe maka ọgbọ.
Na ọ bụrụ na ị na-na na a ụgbọ okporo ígwè enthusiast, a UK okporo ígwè ezumike mmemmem na-adọrọ mmasị eme ihe na ebe niile si Aberdeen ka Penzance.
Ya mere ọ bụrụ na gị obi set on ịhụ Britain ụgbọ okporo ígwè, ebe a na-asa na na anya-track Atụmatụ.
Eleta Glasgow Central Station bụ kwesịrị - bụghị naanị na ọ ga jikọọ gị Scotland si sinik utọ, ma ọ na-nwere a 91 percent ihu ọma ọnụego si Watchdog Transport Focus, ebe nwe Paul Lyons agba anọ tours a ụbọchị na ya kpakpando ya BBC TV usoro.
Birmingham New Street bụ ọdụ ọzọ na-etu ọnụ maka afọ ojuju ndị ahịa. The West Midlands okporo ígwè ehiwe e sere redeveloped na 2015 na obụrede mbụre a oke nke jụụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, gụnyere ụlọ burger Five Guys n'ime ụlọ-zuru oke maka nkwụsị olulu.
Eze Cross Station
Ọ dịghị ezigbo ụgbọ okporo ígwè enthusiast ga-ahapụ Britain enweghị juputara ịgagharị London si Eze Cross Station. Ọ na-esote eze Cross St Pancras Underground Station, nso Regent si Park na The British Ọbá akwụkwọ, na ulo na ihe omimi Platform 9 ¾, ọpụpụ ebe maka Hogwarts Express - ezu kwuru.
Train ngwa Raildar atụmatụ a ndụ map nke ọ bụla ụgbọ okporo ígwè na UK okporo ígwè netwọk - di omimi version ọbụna na-egosi ụgbọ oloko na-akpụ akpụ na gburugburu. Nke a ụgbọ okporo ígwè n'anya si fantasy ngwa na-agụnye track layouts na-ejikọta map - ihe a magburu onwe echiche!
5. Light agụ
Ọ bụrụ na ị na mgbe riveting okporo ígwè metụtara ịgụ ihe, Parallel Lines ahụ na-ede akwụkwọ Ian Marchant iri a wry anya 175 afọ nke Britain ibu na ụgbọ oloko. Dere na ahuhu na ọchị, ọ bụ ihe inspirational nghọta n'ime British agwa na omenala.
6. Agụ maka ezi enthusiasts
Ke mbubreyo 19nke na mmalite 20nke Ọtụtụ narị afọ, George Bradshaw si n'ọdụ ụgbọ okporo nduzi ndị na ngwa ọdịnala nke ụbọchị ha na nyere ọhụrụ ọmụma na ụgbọ okporo ụzọ gasị gburugburu Britain na gafee continental Europe. The April 1910 edere ntuziaka na elu igwe na-enweghị atụ nke netwọk ụgbọ okporo ígwè Britain ma ghọọ akwụkwọ nsọ maka ndị na-ahụ ụgbọ okporo ígwè - find reprinted editions online at Amazon.
7. online mmụta
Enwere ike ịnweta ịntanetị n'efu ma ọ bụ ọnụ ahịa dị ọnụ ala n'ọtụtụ ụzọ ụgbọ oloko UK na etiti obodo, ma ọ bụrụ na gị njem bụ akụkụ nke a ogologo ebie, -amụ ihe maka ihe online ogo na amasị nke Anglia Ruskin Anya Learning pụrụ ịnọgide Iweputa. Na e nwere ihe na-ekwu banyere na-akparị ụka na ụmụ klas na mba dị iche iche mgbe ị tụgharịa gburugburu n'ókè-ala- na gafee clifftops.
Soro ndị a asaa na gbanyụọ-track Atụmatụ maka a British okporo ígwè ezumike ị ga-echefu - ịhụ gị na ọdụ.
Ị nwere Atụmatụ maka tren njem? Na-eso ha na ihe ngalaba na ọ bụrụ na ị mkpa a ụgbọ okporo ígwè – Zọpụta A ụgbọ okporo.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbritain-by-train-8-on-and-off-track-tips%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ukrail britain britrail okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè ejegharị